ဘယ်လိုကီးဘုတ်ပေါ်မှာအစာရှောင်ခြင်းစာရိုက်သင်ယူဖို့ - အစီအစဉ်များနှင့်အွန်လိုင်းရေး SIMULATOR - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
ဘယ်လိုကီးဘုတ်ပေါ်မှာအစာရှောင်ခြင်းစာရိုက်သင်ယူဖို့ - အစီအစဉ်များနှင့်အွန်လိုင်းရေး Simulator
အခုတော့မကွန်ပျူတာမရှိတော့အဲဒီမှာနှင့်မဤနေရာတွင်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ကြီးထွားလာသည် - နှင့်ဤကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှု၏တန်ဖိုးဆိုလိုသည်။ ဤစွပ်စွဲခံရနိုင်ပြီး, ကီးဘုတ်မှာရှာနေစရာမလိုဘဲနှစ်ဦးစလုံးတို့သည်လက်မြန်ဆန်ပုံနှိပ်မြန်နှုန်းအဖြစ်အသုံးဝင်သောကျွမ်းကျင်မှု။
ဒါပေမယ့်အလွန်ကိုမှန်ကန် - ထိုကဲ့သို့သောကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒါရိုးရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သင်မှန်မှန် (အနည်းဆုံး 20-30 မိနစ်။ တစ်နေ့လျှင်) လျှင်အနည်းဆုံး, ပြီးတော့ 2-4 ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်တောင်မှသင်ကရိုက်နှိပ်စာသား၏အမြန်နှုန်းကြီးထွားဖို့ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသတိထားမိခြင်းမရှိဘဲ။
ဤဆောင်းပါး၌ငါ (အစာရှောင်ခြင်းစာရိုက်သင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များနှင့်ရေး Simulator ပြုစုခဲ့ကြအနည်းဆုံးအားငါ့အပုံနှိပ်အမြန်နှုန်းကိုတောင်ငါမ-မျှသော်လည်းတိုးမြှင့်, ငါကီးဘုတ်မှာ glance နေကြသည်🙂 ).
ဒါကဖြစ်ကောင်းတစ်ဆယ်နှင့်အတူစာရိုက်လေ့ကျင့်ရေး "မျက်စိကန်း" များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ တသမတ်တည်း, ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းတစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ကိုင်ဖို့သငျသညျသှနျ:
ထိုစာအပြီး, အဘယ်သူမျှအပြောင်းအလဲများကိုစသည်တို့ကိုအက္ခရာများ၏ရှုပ်ထွေးသောအစုံ, ထို့နောက်စာသား, ဖြစ်ကြသည်
တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက် - paid program ကို။ ပေမယ့်, ငါကကုန်ကျငွေကိုဝန်ခံရပါမည်။ (- အလားအလာအလွန်လျင်မြန်စွာရိုက်ထည့်ရန်သင်ယူနိုင်သော်လည်း, ပစ်အစည်းအဝေးများအချို့သောရလဒ်များကိုအောင်မြင်တော်မူပြီးမှ, လမ်းဖြင့်အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများ!) လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဤအစီအစဉ်၏အားသာချက်ယူပြီး, ကီးဘုတ်မှာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာကြပါပြီ။
အဓိကပြတင်းပေါက် VerseQ ။
နောက်ထပ်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုချဉ်းကပ်။ အဘယ်သူမျှမသင်ခန်းစာများသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများရှိပါတယ်, သင်စာရိုက်ချက်ချင်းလေ့ကျင့်သည့်အတွက်သင်ခန်းစာတစ်ခုစီပါ!
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်သင်သည်အလျင်အမြန်အသုံးအများဆုံးကို keyboard shortcuts တွေကိုအလွတ်ကျက်နိုင်သည်ကိုစာလုံးများပေါင်းစပ်ကာထယူလိုက်တယ်တဲ့လှည် algorithm ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအမှားတွေလုပ်လျှင်, အစီအစဉ်ကိုနောက်တဖန်ဤစာသားဖြတ်သန်းသွားရန်သင့်အားအတင်းပါဘူး - ဒါကြောင့်ရိုးရိုးသင်တို့အဖို့နောက်ထပ် string ကိုတစ်ကြိမ်, ဤသင်္ကေတများအလုပ်လုပ်ခဲ့အလျောက်။
ထို့ကြောင့် algorithm ကိုလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့အားနည်းသောဒေသများတွင်တွက်ချက်သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ကိုစတင်ခဲ့သည်။ သငျသညျစဉ်မှာအများဆုံး "ပြဿနာ" key ကို (နှင့်သူတို့🙂ပိုင်ဆိုင်တိုင်းလူတစ်) သတိရဖို့ကိုစတင်ပါ။
ပထမတော့သူကဒါမလှယျကူပုံရသည်, ဒါပေမယ့်အလျင်အမြန်ရန်အသုံးပြုရ။ စကားမစပ်, ရုရှားအပြင်, လေ့ကျင့်သင်ကြားနှင့်အင်္ဂလိပ် layout ကိုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ minuses ၏: program ကိုပေးဆောင်။
ရုံအစီအစဉ်၏ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းကိုသတိပြုပါချင်: သဘာဝ, အစိမ်းရောင်နောက်ခံ, ကျွန်းသစ်, စတာတွေအပေါ်ပြသပါလိမ့်မည်
ပထမဦးဆုံးပရိုဂရမ်နှစ်ခုမတူဘဲ, ဒီအခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်၌သင်တို့ကို (developer များအထူးကျေးဇူးတင်ရှိ) ကြော်ငြာမမြင်ရမည်! ရုရှား, လကျတငျနှင့်ယူကရိန်း: အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတော်တော်များများအပြင်အဆင်အတွက်ကီးဘုတ်ကနေအမြန်နှုန်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသင်ပေးတယ်။
လုံ, ဆိုလိုသည်မှာ, သင့်အချိန်ဇယားသင်တန်းကာလဖြစ်ပါသည် စာရင်းဇယားစောင့်ရှောက်။ ယင်း utility ကိုအလွယ်တကူမျိုးစုံသည်အသုံးပြုသူများကို set up နိုင်ပါတယ်: သင်တစ်ဦးထက်ပိုကွန်ပျူတာများအတွက်လေ့လာနေကြလျှင်, သုံးစွဲဖို့အလွန်အဆင်ပြေသည်အတိုင်း, စကားမစပ်။ ရုံငါသည်သင်တို့ကိုတောက်ပနှင့်ရယ်စရာပြက်လုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်ကြောင်းကောင်းသောအကူအညီနှငျ့အကူအညီကဆိုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်က software ကို developer များစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူတက်လာသည်ဟုခံစားမိနေပါတယ်။ ကျွန်မရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်အကြံပြု!
ဤသည်ကွန်ပျူတာ Simulator ကိုအများဆုံးသာမန်ကွန်ပျူတာဂိမ်းနဲ့ဆင်တူ: ငယ်နဂါးထံမှရရန်, သင်ကီးဘုတ်ပေါ်မှန်ကန်သော key ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလူကြီးများနှင့်ကလေးများနှစ်ဦးစလုံးမှအယူခံလိမ့်မယ်တောက်ပခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝတဲ့အရောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာနားလည်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်နှင့်တာဝန်ခံ၏အခမဲ့ (လမ်းဖြင့်အများအပြားဗားရှင်းတှေရှိခဲ့တယျ: .. 1993 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံး, ဒုတိယ - 1999 ခုနှစ်အခုတော့ဖြစ်ကောင်း, ပိုသစ်သောဗားရှင်းလည်းမရှိ) ။
သငျသညျကိုမှန်မှန်သင့်မှာအနည်းဆုံး 5-10 မိနစ် - ကောင်းတစ်ဦးရလဒ်သည်။ ဤအစီအစဉ်အတွက်သုံးစွဲဖို့နေ့ဖြစ်၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငါကစားရန်အကြံပြု!
အားလုံး 10 ဦး
ယင်း၏နိယာမအတွက်အစီအစဉ်ကို "တစ်ကိုယ်တော်" ကိုအလွန်ဆင်တူသောဤအခမဲ့အွန်လိုင်း Simulator ကို။ သငျသညျလေ့ကျင့်ရေးစတင်ခင်မှာ, သင်သည်သင်၏တဲ့ character set ၏အမြန်နှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်မည်သည့်စမ်းသပ်မှုတာဝန်, ရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။
သင်တန်း - သငျ site ပေါ်တွင် register ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုမြင့်လျှင်ဒါစကားမစပ်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိ - သငျကျော်ကြား :) ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်ထပ်အခမဲ့အွန်လိုင်း Simulator ကို။ ဒါဟာအားလုံးအတူတူပင်, "တစ်ကိုယ်တော်" သူတို့ကိုသတိပေးနေပါတယ်။ အဆိုပါ Simulator ကို, လမ်းဖြင့်, တစ်ဦးရိုးရှင်းသောစတိုင်ဖန်ဆင်းထားသည်: အဘယ်သူမျှမလှပသောနောက်ခံကား, သို့ရာတွင်ရှိပါတယ်, ယေဘုယျအတွက်ပိုဘာမှမရှိဘူးပါ!
ဤသည် Simulator ကိုတစ်ဦးချင်းစီစကားများလေ့ကျင့်ပေးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ စစ်ဆင်ရေး၏၎င်း၏နိယာမအထက်ပါဆင်တူဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တစျခုအင်္ဂါရပ်လည်းမရှိ။ တိုင်းသင်ကတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးရိုက်ထည့်စကားလုံးနှင့် 10-15 ကြိမ်! ထို့အပြင်တစ်ဦးအစုံမှာတစ်ခုချင်းစီကိုစကားလုံးတစ်ခုချင်းစီစာတစ်စောင် - ထို Simulator ကိုသင် button ကိုနှိပ်ဖို့ရှိသည်ထားတဲ့လက်ချောင်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အဆင်ပြေအလုံအလောက်, ရထား, အတူသငျသညျမသာနိုင်ရုရှား, ဒါပေမယ့်လည်းလက်တင်၌တည်၏။
ဤသည် Simulator ကိုလက်တင်အပြင်အဆင်လေ့ကျင့်ပေးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင့်အနေဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (အနည်းဆုံးအခြေခံစကားများ) ကိုသိမထားဘူးဆိုရင် - အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း, သင်တို့သည်ပြဿနာဖြစ်လိမ့်မည်။
မြန်နှုန်းစာရင်းဇယား, အမှားအယွင်းများ, အမှတ်ပေးအမျိုးမျိုးစကားလုံးများနှင့်ပေါင်းစပ်: ကြွင်းသောအရာများအတွက်, တခြားလူတိုင်းတူသောအရာခပ်သိမ်းလည်းမရှိ။
နာမည်ကျော်အွန်လိုင်း VerseQ အစီအစဉ်၏ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း။ လူအပေါင်းတို့သည်ပရိုဂရမ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို, ဒါပေမယ့်, မရရှိနိုင်ပါကလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အွန်လိုင်းဗားရှင်းကိုစတင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ စတင်ရန် - သင်မှတ်ပုံတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
သငျသညျကီးဘုတ်နှင့်အတူမြန်နှုန်းစာရိုက်အတွက်အမှန်တကယ်လူတို့တဘက်၌ယှဉ်ပြိုင်ရာအတွက်အလွန်စွဲလမ်းအွန်လိုင်းဂိမ်း။ အဆိုပါဂိမ်းနိယာမရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: သင်နှင့်အခြားဧည့်သည်များရှေ့တွင်တစ်ချိန်တည်းမှာဆိုက်သင် dial ချင်သောစာသားပေါ်လာသည်။ သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်. - ကားများပိုမိုမြန်ဆန် (နှေးကွေး) ကို finish ကိုလိုင်းမှရွေ့လျား။ အဘယ်သူသည်တက်ကောက်ပါလိမ့်မယ် - သူကအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ထိုသို့သောရိုးရှင်းတဲ့အိုင်ဒီယာကြောင်းထင်ရလိမ့်မယ် - နှင့်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဤမျှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်! ယေဘုယျအားဖြင့်ကြောင့်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုလေ့လာသူအားလုံးကိုအကြံပြုသည်။
မြန်နှုန်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခလုတ်သင်ယူခြင်းသည်အလွန်တောက်ပနှင့်အေးမြဆော့ဖ်ဝဲ။ ပိုများသောကျောင်းကို-အသက်ကလေးတွေအပေါ်အာရုံစိုက်ပေမယ့်သင့်လျော်သော, မူအရ, အရာအားလုံး။ နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ရုရှားအင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ် layout ကိုသင်ယူနိုင်ပါ။
စုစုပေါင်းများတွင် program ကိုသင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအပေါ် မူတည်. အခက်အခဲ 8 အဆင့်ဆင့်ချထားကြ၏။ စကားမစပ်သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်တွင်သင်သည်လူတယောက်အဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့အခါ, အသစ်တစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ရန်သင့်အားပေးပို့ပါလိမ့်မယ်တဲ့သံလိုက်အိမ်မြှောင်မြင်လိမ့်မည်။
စကားမစပ်ကိုပရိုဂရမ်, အများဆုံးပုံမှန်ကျောင်းသားများ, ဆုတစ်ရွှေတံဆိပ်။ အဆိုပါ minuses ၏: တစ်သရုပ်ပြဗားရှင်းလည်းမရှိပေမယ့်, အစီအစဉ်ကိုပေးဆောင်။ ငါကြိုးစားရန်အကြံပြုပါသည်။
ရိုးရှင်းအဆင်ပြေပြေနဲ့ကီးဘုတ်ပေါ်မှာအက္ခရာ set Simulator ကို "မျက်စိကန်း" လေ့ကျင့်ပေးဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ အခက်အခဲများစွာအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်: အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဖို့အစပြုဘို့ (သူအခြေခံသိတယ်), နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများအတွက်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ရန်စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်သွားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ စကားမစပ်ကိုပရိုဂရမ်သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် (ထိုစာရင်းဇယားများတွင်, စတာတွေဟာသူတို့ရဲ့မြန်နှုန်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, စာသင်ခန်း, သူတို့ရဲ့အမှားတွေ့ပါ) လေ့လာသင်ယူသူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်သောစာရင်းဇယားများရှိပါတယ်။
က iQwer - ယခုငါရပ်တန့်ဖို့လိုခငျြသညျ့နရောကောင်းပြီ, နောက်ဆုံးသင်တန်းဆရာ။ တခြားသူတွေရဲ့အဓိကကွဲပြားအင်္ဂါရပ် - ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ရလဒ်-oriented ဖြစ်ပါတယ်။ developer များဂတိတော်ရှိသည်အတိုင်း - အတန်းနာရီအနည်းငယ်သင်ကီးဘုတ်၏ကြားမှစာသားကိုရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ် (ပေမယ့်အဖြစ်အစာရှောင်ခြင်း, ဒါပေမယ့်ပြီးသားမျက်စိကန်းအတွက်မပါ),
သင်ကီးဘုတ်ကနေဇာတ်ကောင်ရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်သည့်နှင့်အတူအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့အတှကျ Simulator ကိုပေးသောတဖြည်းဖြည်းနှင့် imperceptibly, ကိုယ်ပိုင် algorithm ကိုအသုံးပြုသည်။ (အထကျပုံရိပ်မှာ) ကို window ၏ထိပ်မှာစကားမစပ်အမြန်နှုန်းနှင့်အမှားစာရင်းဇယားများ၏အရေအတွက်ကိုမရရှိနိုင်ပါ။
ဒီတွင်ငါဖြည့်စွက်အဘို့, ယနေ့ရှိသည် - အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ!